चितवनलाई कुनैपनि हालतमा प्रदेश–३ को राजधानी बनाउनुपर्छः प्रकाश अधिकारी (अन्तरवार्ता) – Saurahaonline.com
चितवनलाई कुनैपनि हालतमा प्रदेश–३ को राजधानी बनाउनुपर्छः प्रकाश अधिकारी (अन्तरवार्ता)
सौराहा अनलाइन | २०७४, १६ मंसिर शनिबार
प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको केन्द्रीय महासचिवसम्म हुनुभएका प्रकाश अधिकारी यतिखेर चितवन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा ‘ख’ मा उम्मेदवार छन् । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार अधिकारी व्यवस्थित सहरको रुपमा चितवनलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी चितवन हुनैपर्नेमा अधिकारीको अडान छ । अधिकारी कांग्रेसको राजनीतिमा पुरानै नेता भएपनि संसदीय भिडन्तमा नयाँ हुन् । चुनावी दौडधुपको अन्तिम रफ्तारमा रहेका उनीहरु शुक्रबार साँझ कायाकैरनको कार्यालय आए । उनीसँग विनोदबाबु रिजाल र विप्लव काफ्लेले गरेको कुराकानीः
चुनावी दौडमा अन्तिम तयारीमा लागिरहनुभएको छ, कस्तो भइरहेको छ ?
एकदमै राम्रो माहोल बनिरहेको छ । जे सोचेका थियौँ, जनताको साथ त्योभन्दा धेरै राम्रो पाएका छौँ । युवा, तरुण, महिला सबैको साथ छ । चुनावले एउटा दिशा पक्डेको छ ।
स्थानीय विकासका के ऐजण्डा लिएर जानुभएको छ ?
म जहाँ–जहाँ गएँ, त्यहाँ सडक, ढलका समस्या छन् । महानगर वरिपरिकै वडामा ११, १२, ५, ४ र ७ धेरै सडक ग्राबेलसम्म भएका छैनन् । वर्षामा जुत्तासम्म लगाएर हिड्ने अवस्था छैन । पानी निकासको व्यवस्था छैन । ११ र १२ मा ठूलो ड्रेनकै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रदेश तीव्र शहरीकरणको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । नारायणगढ, भरतपुर–१०, क्षेत्रपुरमा शहर विकास हुने सम्भावना कम छ । धेरै घर बनिसकेका छन् । ११, १२, ४ र ७ मा शहर विकास हुने देखिन्छ । बसाइँसराइको दर हेर्दा २० वर्षपछि कंक्रिटको शहर बन्ने देखिन्छ । कमसेकम ५० वर्षपछिको जनसंख्या, शहरीकरणको लेबल के हुनसक्छ, भौतिक पूर्वाधारको अहिल्यै अवस्था मूल्यांकन गर्न सकेनौँ भने काठमाण्डौ भन्दा बेहाल हुने देखिन्छ । ४ मिटरको बाटो बनाएर शहरीकरणको चाप थेग्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिस्तरका मापदण्डका सडक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । रिङरोडले मेनरोडसँग जोड्ने गरी टेक्नीकल रुपमै प्लानिङ गर्नु जरुरी छ । महानगर त बनिसक्यो । एउटासम्म पार्क छैन । जग्गा किनेरै भएपनि ४÷५ वटा पार्क बनाउनुपर्छ । पव्लिक स्वीमङ पुल बनाउनुपर्छ । हाइवे असाध्यै ‘क्राउडेड’ छ । बसपार्क, हाकिमचोक, चौविसकोठी, क्याम्पस गेट, लायन्चोक, पुलचोकमा ‘फ्लाई ओभर ब्रीज’जरुरी छ । मानवीय आस्थासँग जोडिएको पक्ष छ । देवघाटमा धार्मिक पर्यटकलाई प्रशस्तै आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । बागेश्वरी, गणेशस्थानसम्म पर्यटक चहलपहल बढाउने गुरुयोजना बनाउनु जरुरी छ । राइनो ताल, नारायणी नदीलाई जलविहारको केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ । शिवघाटको जीर्ण शिवालय र त्यहाँको जमीन संरक्षण गरेर त्यसलाई शिवधम बनाउन सकिन्छ । धार्मिक, संस्कार संस्कृति जगेर्णा गर्न सक्नुपर्छ जसले नेपालीपनको जगेर्णा हुन्छ । केवीलाइन, आँपटारी, गणेशस्थान, जंगल किनारका सुकुम्बासी वस्तीलाई जग्गाधनि पुर्जा मात्रै दिने होइन, त्यसलाई यो शहरबीचमा व्यवस्थित वस्तीका रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ । आफ्नो स्वामित्व दिलाउने र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । ती वस्तीलाई सुन्दर शहरका रुपमा विकास गर्ने योजना छन् । कमाई नभएका घरमा कमाई गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कमसेकम सामान्य स्वरोजगारको अवस्था बनाउनुपर्छ । जसले बोल्न सक्दैन, विद्रोह गर्न सक्दैनन् तिनका पक्षमा काम गरेको देखिदैन । अब यस्तो हुँदैन । यो मेरो प्रमुख मुद्धा हो । वृद्धभत्ता नहुने र नपुग्ने र नभएकालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र बास जस्ता आधारभूत आवश्यकता राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अपाङ्ग, अशक्तलाई राज्यले हेरविचार गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढेको छु ।
प्रदेश तीनको राजधानी बनाउनका लागि यहाँले दियालो बंगला मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बन्छ भनेर एक प्रसंगमा भन्नु भएको थियो, यो सम्भव छ ?
चितवन प्रदेशको राजधानी तीन कुराले बन्न सक्छ । साच्चै संघीयता शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नकै लागि हो भने हामीले काठमाडौंमा प्रदेशको राजधानी बनाउन सक्दैनौँ । ललितपुर, भक्तपुरमा बनाउन सक्दैनौँ । किनभने त्यहीं सडक चल्न सकेको छैन । प्रदेशको पनि काम त्यही लगेर थोपरिदियौँ भने त्यो काठमाडौं चल्छ कि चल्दैन ? धुलिखेल पनि काठमाडौं भएरै जाने हो । त्यो पनि सम्भव छैन । पर्याप्त स्पेस छैन ।
भौगोलिकरुपमा हेर्दा चितवन त प्रदेशको छेउमा पर्छ, सम्भव होला र ?
कुनचाहीं देशको राजधानी केन्द्रमा छ । दिल्ली भारतको केन्द्रमा छ र ? भौगोलिक सुगमतामात्रै आधार मानिन्छ र ? नापेर मध्यविन्दुमै राजधानी बनाइएका छैनन् नि होइन र ? मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग र संसद् भवनहरु बन्नुप¥यो । चितवनबाहेक यी सबै संरचना बनाउन सकिने सम्भावना भएको जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने, संरचना चलाउन सक्ने ठाउँ कहाँनेर छ ? चितवन त नेपालकै राजधानी बन्न लायक ठाउँ छ यहाँको स्पेशका कारण । प्रदेशको राजधानी चितवन नबनाएर कहाँ बनाउने हो ? त्यसको आधार के हो ?
तपाईको पार्टीले पनि यो विषयमा लबिङ गरेको देखिदैन नि ?
पार्टीको नेतृत्व तहलाई कन्भिन्स गर्न प्रयत्न गर्छु । चितवन राजधानी बन्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो । हरेक हिसाबले यो उपयुक्त छ । चितवनभन्दा यो कारणले फलानो ठाउँ उपयुक्त हो भनेर लजिकसहित कसैले कन्भिन्स गर्न सक्छ ? चितवनको अप्ठ्यारोपन भनेको प्रदेशको छेउमा पर्छ भन्ने कुराबाहेक अरु हरेक कुराले चितवनबाहेक अरु उपयुक्त ठाउँ नै छैन । कुनै शंकै छैन । आवाज नै उठाएकै छैनन् । प्रधानमन्त्रीहरु, नेताहरुले आवाज उठाएकै छैनन् । के कारणले उपयुक्त छैन भनेर आउनुप¥यो नि । संघीयता के सबै कुरा काठमाडौं नै लैजान ल्याएको हो ? यस्तो कुरा गरेर संघीयताको उपहास गर्नु हुँदैन ।
राजनीतिज्ञहरु राजधानी चितवनमा ल्याउन किन बोलेका छैनन् त ?
यो छेउमा पर्छ भन्ने उनीहरुको लजिक होला । छेउमा पर्दै पर्दैन । यो मुलुकको केन्द्र हो । मुलुकको राजधानी ल्याएर प्रदेशको राजधानी काठमाडौं लैजाने हो भने म एसेप्ट गर्छु । बाँकी हिसाबले एसेप्ट गर्ने कुनै लजिक छैन ।
७ वटा वडामा भएको विगतको स्थानीय तह निर्वाचन हेर्दा तपाईको पक्षमा मत देखिदैन नि ।
मेरोभन्दा माहोल कसको छ भन्नुस् त । पबिलकको रेस्पोन्सलाई मलाईभन्दा बढी कसलाई छ ? कार्यकर्ताको भोटले चुनाव जितिन्छ ? संसारमा जितेका छन् कसैले ? कम्युनिष्टलार्य भोट त २०६४ सालमा दिएको हो नि । अहिले कांग्रेसको पक्षमा लहर छ । मेरो पक्षमा पनि लहर छ ।
प्राध्यापन पेशा छाडेर राजनीतिमा लागेकाले केही चुनौती छ कि !
मैले प्राध्यापन गर्दा कुन ठाउँमा कम राजनीति गरेको थिएँ र ? मेरा प्रतिस्पर्धीसँग भएका सबै गुणभन्दा बढी मसँग छ । १७ वर्ष कलेज पढाएर युवाको भावना बुझेको छु । सद्भाव बुझेको छु । अभिभावकहरुसँग नजिक छु । २०५४ सालमा एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा ८० प्रतिशत ठाउँमा जितेको थियो । तर, २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । स्थानीय चुनावको गणित अहिलेको चुनावका लागि अर्थहीन छ । आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण ४ जनानै वडा सदस्यमा ४÷५ सय मतले कांग्रेसले जित्दा वडाध्यक्ष हारेका छौँ । त्यो हिसाबले गणना गरेर हुँदैन । म प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी हुँ । मत जहिलेपनि परिवर्तनशील हुन्छ । मेरो विगत हेर्नुस् । मेरो चरित्र, प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हँु जस्तो लाग्छ भने सबैलाई विजयी गराउन अनुरोध गर्दछु ।
तपाईंले भन्ने खुल्ला विश्वविद्यालयका मुद्धा कहाँ पुग्यो ?
म पब्लिक क्याम्पसमा पढाएको व्यक्ति हुँ । पब्लिक क्याम्पसको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि पब्लिक विश्वविद्यालय चाहिन्छ । नेपाल अधिराज्यभरका पब्लिक क्याम्पसहरुको केन्द्रीय भेलाले चितवनको दियालो बंगाला क्षेत्रमा पब्लिक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने र चितवनमा पब्लिक विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेका थियौं । यो कार्यान्वयन भएमा नेपालका धेरै क्याम्पसको केन्द्र चितवन बन्ने छ । त्रिविभन्दा ठूलो रुपमा जानेछ । सरकारी अस्पताललाई एमबीबिएस पढाई सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढायौँ भने सस्तो रेटमा पढ्न पाउनेछन् । चितवन शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्र बन्ने सम्भावना छ ।
भरतपुर विमानस्थल विवाद प्रकरण अझै लम्बेको छ । कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
यो विमानस्थल सार्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट भनाइ छ । विमानस्थल सारेर अर्को ठाउँमा बनाउने उपयुक्त ठाउँ छैन । बरु आसपासका बस्तीलाई पनि यथावत राख्ने र विमानस्थललाई उत्तरतर्फ विस्तार गर्न सकिन्छ । सेनाको व्यारेकलाई बरु अन्यत्र सार्न सकिन्छ । सोही क्षेत्रमा विमानस्थललाई थप स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । स्थानान्तरण गर्छौँ भनेर बोल्नु त्यो असम्भव कुरा हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीरकणको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनमा छन् । चुनावी मैदाना उत्रर्दा कत्तिको कठिन परेको छ ?
लोकतन्त्र जनतालाई सार्वभौमिक ठान्ने शासन व्यवस्था हो । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था भनेको कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा जनवादी केन्द्रीयताको नाउँमा सबै अधिकार कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्टका नेताले नियन्त्रण गर्ने शासन हो । लोकतन्त्र र पद्धतिको खिलापमा गठबन्धन भएको र कम्युनिष्टले १० वर्षमा साम्यवाद ल्याउँछौँ भनेकाले जनता त्यो पक्षमा छैनौँ । गठबन्धन हुने बित्तिकै बुरुक्क उफे्रेर एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले साम्यवादी व्यवस्था ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन भनेर बोलेकै हुन् । कांग्रेसको नेतृत्वविना राष्ट्रिय कुन मुद्धा कम्युनिष्टको नेतृत्व भएको छ ? मुलुकले निकास र परिवर्तन कम्युनिष्ट नेतृत्वमा मात्रै भएको छ ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समृद्धि र विकासलाई केन्द्रीकृत गराउने मुद्धा बन्नु पर्दथ्यो । कम्युनिष्ट गठबन्धन बनाएर कम्युनिष्टवादी र लोकतन्त्रवादी बनाएर कित्ताकाट गरेर द्वन्द्व निम्ताएका छन् । मुलुकले बाटो पक्डन लागेका बेला कम्युष्निटले बहाना निकालेर द्वन्द्व निम्ताइरहेका छन् । जनताले त्यो बुझेका छन् ।